Imiboniso bhanyabhanya yeMagical kwiiNkophe nguTal Peleg | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Sele sizise amaxesha amaninzi ku amagcisa okuzenzela ukuba ngobuchule babo kunye nokuqala kwabo bayasibonisa ukuba umzimba womntu ikwayiyo enkulu yokuvusa iimvakalelo kunye neemvakalelo. Eli gcisa lobugcisa osebenzisa imilebe yakhe ukujika yonke into ayenzileyo ibe yinto engaqhelekanga, okanye uDe la Ossa osizisela uloyiko kuloo midlalo ayenzayo ngemizobo yakhe ukusishiya siphantse sothuka.
UTal Pele ngomnye umculi wezinto zobugcisa onesiphiwo esihle kwaye uyasibonisa kolu luhlu ukuba sebenzisa i-eyeliner ukupeyinta imiboniso bhanyabhanya, umculo kunye neencwadi kwiinkophe zakho. Indlela entle yokwandisa ubuhle bala mehlo kwaye ungene kumabali amancinci abaliswayo xa umntu ejonge ngqo kuwo.
UPeleg uzama faka iris kunye neenkophe kwimizekeliso ukufumana isiphumo sokugqibela apho into nganye inomsebenzi wayo. KwiNkosazana kunye neFrog, uPegel usebenzisa ijwabu ukumela iinwele zenkosazana, nakwiNkosazana kunye nePea, umbala oluhlaza we-iris usetyenziselwa ipea enkulu.
Zonke zinye uthotho olukhulu lwemiboniso bhanyabhanya encinci njengoMtshakazi weNkosazana, uAlice kwiWonderland okanye uFrozen phakathi kwabanye abaninzi. Indlela enomdla yokusebenzisa i-makeup ngendlela yayo yobugcisa kunye nepeyinti kwaye isisondeza kubhejethi ezinobungozi kangangokuba ngamanye amaxesha sizisa kula malungu.
Unayo facebook wakho ukulandela umsebenzi omkhulu ekwakhiweni kweli gcisa kwaye uza kufumanisa kulo mininzi imisebenzi emincinci apho uya kufumana zonke iintlobo zamabali kunye nemiboniso bhanyabhanya wasentsomini we cinema yaseMelika.
Ndikushiya ne omnye umzobi ukuba sizamile apha ngamanye amaxesha njengoShonagh Scott ngakumbi njengeDisney, nangona umoya omdaka ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umculi we-Makeup uTal Peleg wenza imiboniso bhanyabhanya evela kwiimuvi nakwiincwadi kwiinkophe zakhe
UErica Tourís Fresco sitsho
Jonga uMelanie Braggio !!
Phendula u-Erica Tourís Fresco